iPhone Latest Model တှမှော သုံးပေးထားတဲ့ A13 Bionic Chip ကိုအသေးစိတျလလေ့ာကွညျ့ခွငျး |
Apple / iPhone / Knowledge
- July 22, 2020July 22, 2020 - Pyae Heinn Kyaw
Apple ဟာ သူ့ Product တှရေဲ့ Hardware, Software မှနျသမြှကို တတျနိုငျသလောကျ ကိုယျတိုငျ Design ဆှဲပွီးထုတျလုပျတာဖွဈလို့ Apple Product တှဟော Hardware/Software Compatibility ပိုငျးမှာ နာမညျကြျောကွားပါတယျ .. ဒီနမှေ့ာ ပွောပွပေးသှားမယျ့ အကွောငျးအရာကတော့ A13 Bionic Chip အကွောငျးကို အသေးစိတျခှဲခွမျးစိတျဖွာပွီး ရှငျးပွပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ
A13 Bionic Chip ဆိုတာကတော့ Apple ရဲ့ ကိုယျပိုငျ SoC (System on Chip) ဖွဈပွီးတော့ iPhone 11 Series နဲ့ iPhone SE 2020 မှာ အသုံးပွုပေးထားတဲ့ Chipset ပဲဖွဈပါတယျ
SoC ဆိုတာ ဖုနျးတလုံးရဲ့ ဦးနှောကျနဲ့တူပါတယျ .. SoC မရှိရငျ သငျ့ဖုနျးကဘာမှသုံးစားလို့မရတော့ပါဘူး .. Apple ဟာ iPhone အတှကျ Chipset တှကေို ကျိုယျပိုငျ Design ဆှဲပွီးထုတျလုပျလာတာ အခုဆို A13 ဆိုတဲ့ မြိုးဆကျကိုရောကျရှိလာပွီဖွဈပါတယျ .. A13 Bionic Chip ဟာ ARM Architecture ပျေါကိုအခွခေံထားတာဖွဈလို့ ARM Holding ကနေ Architecture ကို လိုငျစငျကွေးပေးပွီး ဝယျယူရပါတယျ
အဲ့ဒီနောကျမှာတော့ Chipset ရဲ့ Design ကို Apple Silicon Engineer တှကေို အသေးစိတျရေးဆှဲပွီး ထုတျလုပျတဲ့အပိုငျးမှာတော့ Semiconductor Sector မှာနာမညျကွီး ထိုငျဝမျကုမ်ပဏိ TSMC ကတာဝနျယူ ထုတျလုပျပေးတာဖွဈပါတယျ .. A13 ရဲ့ ARM version က ARMv8.4-A ပဲဖွဈပါတယျ
A13 Bionic Chip ဟာ 7nm ကိုမှ Second-generation ဖွဈပွီးတော့ EUV Lithography နညျးပညာအသုံးပွုပွီး ထုတျလုပျထားတာဖွဈပါတယျ .. ဒီ SoC သေးသေးလေးထဲမှာ Transistor ပေါငျး 8.5 ဘီလီယံပါဝငျပွီးတော့ လကျရှိထှကျထားသမြှ SoC တှထေဲမှာ အမွနျဆုံးနဲ့ Powerful အဖွဈဆုံး SoC လို့ဆိုနိုငျပါတယျ
ဒီတော့ A13 Bionic Chip ထဲဘာတှပေါလဲ အသေးစိတျကွညျ့လိုကျရအောငျ .. စာနဲ့မပွောခငျ အောကျကပုံကိုအရငျကွညျ့ကွညျ့လိုကျပါ .. ဒါက A13 Bionic Chip ထဲမှာ မွှုပျနှံထားတဲ့ Components တှပေါပဲ .. ဒါတောငျ အပွညျ့အစုံပါသေးတာမဟုတျပါဘူး
Photo : Apple September Event 2019
A13 Bionic Chip ထဲမှာ CPU Core6လုံးပါ,ပါတယျ ..6လုံးထဲကမှ4လုံးက စှမျးဆောငျရညျသိပျမလိုတဲ့အပိုငျးတှမှော အသုံးပွုပွီး အဲ့ Core4လုံးကို Thunder လို့ချေါပါတယျ .. ကနျြတဲ့ Core2လုံးကတော့ စှမျးဆောငျရညျလိုအပျတဲ့အခြိနျမှာ ပါဝငျကူညီပေးတဲ့ Core တှဖွေဈပွီး သူတို့ကို Lightning လိုချေါကာ 2.64GHz clock speed ရှိပါတယျ
Thunder Core4လုံးဟာ အရငျ A12 Bionic ထကျ 20% ပိုမွနျပွီး 40% စှမျးအငျသုံးစှဲမှုသကျသာပါတယျ .. Lightning Core2လုံးကတော့ A12 Bionic ထကျ 20% ပိုမွနျကာ 30% စှမျးအငျခြှတောပေးနိုငျပါတယျ
ဒီ CPU တှထေဲမှာတော့ AMX Block လို့ချေါတဲ့ Machine Learning (ML) Accelerator တှကေိုထညျ့သှငျးပေးထားပွီး Matrix Multiplication ပိုငျးမှာ အရငျမြိုးဆကျထကျ6ဆလောကျပိုမိုမွနျဆနျပါတယျ .. နောကျပွီး ဒီ CPU တှဟော 1 second အတှငျးမှာ လုပျဆောငျခကျြပေါငျး 1 ထရီလီယံ (1000 ဘီလီယံ) ထိလုပျဆောငျပေးနိုငျပါတယျ
အဲ့ဒီနောကျမှာတော့ Apple ကိုယျတိုငျ Design ဆှဲထားတဲ့ Machine Learning (ML) Controller ပါဝငျပွီးတော့ ဒီ ML Controller ဟာ လုပျဆောငျရမယျ့ task တှကေို CPU, GPU, Neural Engine တှဆေီ အလှညျ့ကြ တာဝနျခှဲဝပေေးပါတယျ .. အလုပျတှအေားလုံးကို CPU တခုတညျးက လုပျဆောငျတာမဟုတျပဲ Component အားလုံးက ခှဲဝလေုပျဆောငျတာကွောငျ့ ပိုမွနျလာပွီး efficiency ပိုကောငျးလာပါတော့တယျ .. ဒီနညျးပညာကို Big Little Technology လို့ချေါဆိုပါတယျ
ဒါ့အပွငျ third party developer တှဟော AR Apps တှမှော Natural Language Processing (NLP), Image Classification, Character Animation တှကေို ခြောခြောမှမှေ့ေ့ ဆောငျရှကျလာနိုငျပါတော့တယျ
A13 Bionic Chip ထဲက GPU ဟာလဲ Apple ကိုယျတိုငျ Design ဆှဲတာဖွဈပွီး Core4လုံးပါဝငျပါတယျ .. ဒီ GPU ဟာ အရငျ A12 Bionic Chip ထကျ 20% ပိုမွနျပွီး 40% စှမျးအငျသုံးစှဲမှုသကျသာပါတယျ .. ဒီ GPU ကိုမောငျးနှငျဖို့အတှကျ Metal ဆိုတဲ့ Software နညျးပညာတမြိုးကိုလဲ Apple က ထုတျပေးထားပါတယျ
GPU ဆိုတာကတော့ Graphics Processing Unit ကို ပွောတာဖွဈပွီး Gaming လို Performance အကွီးအကယျြလိုတဲ့နရောမှာ မောငျးနှငျအသုံးပွုပါတယျ
A13 Bionic Chip ထဲက Neural Engine ဟာလဲ Core 8 လုံးပါဝငျပါတယျ .. ဒီ Neural Engine ဟာ အရငျ A12 Bionic Chip ထကျ 20% ပိုမွနျပွီး 15% စှမျးအငျသုံးစှဲမှုသကျသာပါတယျ
Neural Engine ဆိုတာကတော့ Artificial Intelligence (AI) နဲ့ ပတျသကျတဲ့ အရာတှကေို Processing လုပျပေးတဲ့ Hardware ဖွဈပါတယျ .. အဓိက,ကတော့ Face ID ပါတဲ့ Device တှရေဲ့ SoC မှာတှရေ့လရှေိ့ပွီး Face ID အလုပျလုပျဖို့ Neural Network ကို ဒီ Neural Engine ကနတေညျဆောကျပေးတာပဲဖွဈပါတယျ
Face ID အကွောငျးအသေးစိတျဖတျရနျ – https://www.pyaeheinnkyaw.tech/how-apple-face-id-works-and-does-it-secure/
Neural Engine ဟာ Augmented Reality (AR), Machine Learning, Image Recognition အစရှိတဲ့ Software Processing ပေါငျးမြားစှာရဲ့ အဓိကကတြဲ့ Hardware တခုဖွဈပါတယျ .. Neural Engine ထဲမှာ iDevice Security ရဲ့ အသညျးနှလုံးဖွဈတဲ့ Secure Enclave ကိုမွှုပျနှံထားပါတယျ
Secure Enclave ဆိုတာ register လုပျထားတဲ့ Touch ID နဲ့ Face ID စတဲ့ Bio-metric data နဲ့ Apple Pay Data တှကေို Encrypt လုပျပွီးသိမျးပေးထားတဲ့ Hardware တခုပါပဲ .. ဒီလို Dedicated Hardware တခုထညျ့ပေးလိုကျခွငျးအားဖွငျ့ iOS ရဲ့ Kernel ကို exploit (hack) လုပျနိုငျခဲ့ရငျတောငျမှ User ရဲ့ Touch ID or Face ID data ကိုရမှာမဟုတျတော့ပါဘူး
နောကျတခုက A13 Bionic Chip ရဲ့ Neural Engine ကွောငျ့ iPhone တှမှော Deep Fusion လို့ချေါတဲ့ ကငျမရာနညျးပညာအသဈ ပါဝငျလာပါတယျ .. Deep Fusion ဆိုတာကတော့ Low Light အခွအေနမှောတောငျ Detail တှကေောငျးအောငျလုပျပေးတဲ့ နညျးပညာပါ .. ဘယျလိုအလုပျလုပျသလဲဆိုတော့ Capture button မနှိပျခငျ ၄ ပုံ, နှိပျပွီး ၄ ပုံတို့ကိုရိုကျကူးထားမှာဖွဈပွီး capture button ကိုနှိပျလိုကျတဲ့အခါမှာတော့ long exposure ဓာတျပုံတဈပုံရိုကျကူးလိုကျမှာဖွဈပါတယျ .. ဒီတော့တဈခါရိုကျရငျ ဓာတျပုံ9ပုံတပွိုငျတညျးရိုကျကူးပေးမှာဖွဈပွီး ရိုကျကူးထားတဲ့ ဓာတျပုံ9ပုံကိုပေါငျးကာ အကောငျးဆုံး ဓာတျပုံ 1 ပုံထုတျပေးမှာဖွဈပါတယျ
Always on Processor or Motion co-processor
ဒီ Processor တှဟော M Series Co-processor တှပေဲဖွဈပါတယျ .. Co-processor လို့ချေါရခွငျးအကွောငျးကတော့ Processor တခုအနနေဲ့ သီးသနျ့ရပျတညျနတောမဟုတျပဲ မူရငျး A Series Processor ကိုအကူအညီပေးဖို့ ဖနျတီးထားတာဖွဈလို့ Co-processor လို့ချေါခွငျးဖွဈပါတယျ
Apple ဟာ Motion Co-processor တှကေို 2013 ကတညျးက အသုံးပွုခဲ့တာဖွဈပွီး အခု A13 Bionic Chip ထဲပါလာတာကတော့ M13 Motion Co-processor ပဲဖွဈပါတယျ
ဒီ Motion co-processor အလုပျလုပျပုံကိုနညျးနညျးရှငျးပွပါတယျ .. သငျ့ Phone ကိုမသုံးနတေဲ့အခြိနျမှာရော, သုံးနတေဲ့အခြိနျမှာပါ သူတို့က အလုပျလုပျနရေတာဖွဈပါတယျ .. ဖုနျးတလုံးလုံးမှာရှိတဲ့ Sensor တှကေ Data ကို လိုကျလံစုဆောငျးထားပွီး လိုအပျရငျ လိုအပျတဲ့အခြိနျမှာ ခကျြခငျြးအသုံးခနြိုငျအောငျ ပွငျဆငျထားရတာ Motion co-processor တှရေဲ့အလုပျပါ .. ဒီအခကျြက Battery Life ပိုမိုကောငျးမှနျစတောဖွဈပါတယျ
နောကျထပျအလုပျကတော့ iPhone ထဲမှာပါဝငျတဲ့ Accelerator, Gyroscope, Compass, Barometer, Microphone တို့နဲ့ပါ တှဲအလုပျလုပျတာဖွဈပွီး “Hey Siri” လို Voice Command မြိုးကို Response လုပျတာမြိုး, Raise to Wake လို Function မြိုး, သငျလမျးလြှောကျနတော, ကားမောငျးနတော, အိပျနတောအစရှိသဖွငျ့ လှုပျရှားမှုအားလုံးကိုသိရှိနတောမြိုးက ဒီ Motion Co-processor ရဲ့ အကြိုးကြေးဇူးတှပေဲဖွဈပါတယျ
ဒီကောငျလေးကို Application Processor လို့လဲချေါသေးပွီး iPhone, iPad တှမှောအပွငျ Apple Watch, AirPods တို့လို Device တှမှောပါ ထညျ့သှငျးအသုံးပွုထားပါတယျ
A13 Bionic Chip မှာအဓိက အာရုံစိုကျထားတဲ့ အပိုငျး2ပိုငျးရှိပါတယျ .. တပိုငျးက အပျေါမှာပွောခဲ့တဲ့ Machine Learning အပိုငျးရယျ နောကျတပိုငျးက Low Power Design လို့ချေါတဲ့ ပါဝါစားသုံးမှုကို တတျနိုငျသလောကျလြှော့ခတြဲ့အပိုငျးဖွဈပါတယျ
အားလုံးသိပွီးကွတဲ့အတိုငျး A13 Bionic Chip ထဲမှာ အစိတျအပိုငျးမြားစှာပါဝငျပါတယျ .. ဒါပမေယျ့ ဒီအစိတျအပိုငျးတှဟော အမွဲတမျးအလုပျလုပျနတောမဟုတျပါဘူး .. ဒီတော့ အလုပျလုပျတဲ့အစိတျအပိုငျးကိုသာ Power Supply ပေးလိုကျပွီး အလုပျမလုပျနတေဲ့ အစိတျအပိုငျးတှကေို Power ဖွတျတောကျထားမယျဆိုရငျ ဒါဟာ Power စားသုံးမှုအလှနျတရာ လြော့ကသြှားမှာဖွဈပါတယျ .. ဒီနညျးပညာကို A13 Bionic Chip မှာထညျ့သှငျးသုံးစှဲပေးထားပါတယျ
အပျေါမှာပွောခဲ့သလိုပဲ A13 Bionic Chip ဟာ Transistor ပေါငျး 8.5 ဘီလီယံလောကျပါဝငျပွီး Performance လဲအလှနျတရာ ကောငျးမှနျနပေမေယျ့ ပါဝါစားသုံးမှုပိုငျးမှာ သိသိသာသာလြော့နညျးသှားတာက ဒီနညျးပညာကွောငျ့ .. ဒီ Architecture ကွီးဟာ Apple Silicon က Engineer တှကေို အရမျးလေးစားမိတဲ့အခကျြတခကျြပါပဲ
Image Signal Processor (ISP) လို့ချေါတဲ့ Component တမြိုးကလဲ Photography နဲ့ Videography အတှကျအလှနျအရေးပါတဲ့ အစိတျအပိုငျးတခုပဲဖွဈပါတယျ .. ISP ဟာ Camera ကရိုကျလိုကျသမြှ Photo, Video တှကေို Processing လုပျတာဖွဈပွီး ISP ကောငျးလေ Result ကောငျးလပေဲဖွဈပါတယျ
Apple စငျပျေါတကျပွီးအျောသှားတဲ့ Computational photography ဆိုတာကလဲ ဒီ ISP အားကိုးနဲ့အျောသှားတာပါ
Modem ဆိုတာကတော့ သငျ Internet သုံးလို့ရအောငျ ခြိတျဆကျပေးတဲ့ Component လေးဖွဈပွီးတော့ A13 Bionic Chip မှာ Intel ရဲ့ XMM 7660 LTE Modem ကိုအသုံးပွုပေးထားပါတယျ .. 4G Modem ဖွဈပွီးတော့ Download Speed အနနေဲ့ အမြားဆုံး 1.6Gbps (1600 Mbps) အထိရရှိနိုငျပွီး Upload Speed ကတော့ 225Mbps အထိ အမြားဆုံးရရှိနိုငျပါတယျ
– Storage (ROM)
– သငျ့ iPhone ကို Hacker တှအေလှယျတကူတိုကျခိုကျလို့မရနိုငျအောငျ ကာကှယျပေးတဲ့ NX Bit,
– Virtualization နညျးပညာအတှကျ Hardware ကနကေူညီထောကျပံ့ပေးမယျ့နညျးပညာ,
– သငျ့ Data တှကေို ခိုးယူကွညျ့လို့မရနိုငျမယျ့ AES Encryption and Decryption,
– Payment လုပျတဲ့အခါမြိုး ဒါမှမဟုတျ Netflix, Apple Music တို့လို DRM Protect လုပျထားတဲ့ Content တှေ Access လုပျတဲ့အခါမြိုးမှာ လုံခွုံမှုရှိရှိနဲ့ လုပျဆောငျလို့ရဖို့အတှကျ ထညျ့သှငျးပေးထားတဲ့ Trust Zone လို့ချေါတဲ့ Security
– သငျ့ဖုနျးအသံထှကျအောငျပွုလုပျပေးတဲ့ Audio Processor
– Video Format တှကေို Encode/Decode လုပျပေးနိုငျမယျ့ Video Encoder/Decoder
– သငျ့ Display ပျေါမှာ ဘာပွမလဲဆိုတာတှကေို စီစဥျထိနျးညှိပေးတဲ့ Display Controller
– Camera လုပျဆောငျခကျြတှအေတှကျ သီးသနျ့လုပျဆောငျပေးမယျ့ Camera Fusion
အပွငျ တခွား အစိတျအပိုငျးမြားစှာလဲပါဝငျပါသေးတယျ
ကဲ ဒီလောကျဆိုရငျ ရှုပျထှေးလှတဲ့ A13 Bionic Chip ရဲ့ အသေးစိတျအကွောငျးသိသှားလောကျပါပွီ
Ref : Apple, Versus
Apple ဟာ သူ့ Product တွေရဲ့ Hardware, Software မှန်သမျှကို တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ်တိုင် Design ဆွဲပြီးထုတ်လုပ်တာဖြစ်လို့ Apple Product တွေဟာ Hardware/Software Compatibility ပိုင်းမှာ နာမည်ကျော်ကြားပါတယ် .. ဒီနေ့မှာ ပြောပြပေးသွားမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ A13 Bionic Chip အကြောင်းကို အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
A13 Bionic Chip ဆိုတာကတော့ Apple ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် SoC (System on Chip) ဖြစ်ပြီးတော့ iPhone 11 Series နဲ့ iPhone SE 2020 မှာ အသုံးပြုပေးထားတဲ့ Chipset ပဲဖြစ်ပါတယ်
SoC ဆိုတာ ဖုန်းတလုံးရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့တူပါတယ် .. SoC မရှိရင် သင့်ဖုန်းကဘာမှသုံးစားလို့မရတော့ပါဘူး .. Apple ဟာ iPhone အတွက် Chipset တွေကို ကိုယ်ပိုင် Design ဆွဲပြီးထုတ်လုပ်လာတာ အခုဆို A13 ဆိုတဲ့ မျိုးဆက်ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ် .. A13 Bionic Chip ဟာ ARM Architecture ပေါ်ကိုအခြေခံထားတာဖြစ်လို့ ARM Holding ကနေ Architecture ကို လိုင်စင်ကြေးပေးပြီး ဝယ်ယူရပါတယ်
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Chipset ရဲ့ Design ကို Apple Silicon Engineer တွေကို အသေးစိတ်ရေးဆွဲပြီး ထုတ်လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ Semiconductor Sector မှာနာမည်ကြီး ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏိ TSMC ကတာဝန်ယူ ထုတ်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် .. A13 ရဲ့ ARM version က ARMv8.4-A ပဲဖြစ်ပါတယ်
A13 Bionic Chip ဟာ 7nm ကိုမှ Second-generation ဖြစ်ပြီးတော့ EUV Lithography နည်းပညာအသုံးပြုပြီး ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် .. ဒီ SoC သေးသေးလေးထဲမှာ Transistor ပေါင်း 8.5 ဘီလီယံပါဝင်ပြီးတော့ လက်ရှိထွက်ထားသမျှ SoC တွေထဲမှာ အမြန်ဆုံးနဲ့ Powerful အဖြစ်ဆုံး SoC လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်
ဒီတော့ A13 Bionic Chip ထဲဘာတွေပါလဲ အသေးစိတ်ကြည့်လိုက်ရအောင် .. စာနဲ့မပြောခင် အောက်ကပုံကိုအရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ .. ဒါက A13 Bionic Chip ထဲမှာ မြှုပ်နှံထားတဲ့ Components တွေပါပဲ .. ဒါတောင် အပြည့်အစုံပါသေးတာမဟုတ်ပါဘူး
A13 Bionic Chip ထဲမှာ CPU Core6လုံးပါ,ပါတယ် ..6လုံးထဲကမှ4လုံးက စွမ်းဆောင်ရည်သိပ်မလိုတဲ့အပိုင်းတွေမှာ အသုံးပြုပြီး အဲ့ Core4လုံးကို Thunder လို့ခေါ်ပါတယ် .. ကျန်တဲ့ Core2လုံးကတော့ စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ ပါဝင်ကူညီပေးတဲ့ Core တွေဖြစ်ပြီး သူတို့ကို Lightning လိုခေါ်ကာ 2.64GHz clock speed ရှိပါတယ်
Thunder Core4လုံးဟာ အရင် A12 Bionic ထက် 20% ပိုမြန်ပြီး 40% စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသက်သာပါတယ် .. Lightning Core2လုံးကတော့ A12 Bionic ထက် 20% ပိုမြန်ကာ 30% စွမ်းအင်ချွေတာပေးနိုင်ပါတယ်
ဒီ CPU တွေထဲမှာတော့ AMX Block လို့ခေါ်တဲ့ Machine Learning (ML) Accelerator တွေကိုထည့်သွင်းပေးထားပြီး Matrix Multiplication ပိုင်းမှာ အရင်မျိုးဆက်ထက်6ဆလောက်ပိုမိုမြန်ဆန်ပါတယ် .. နောက်ပြီး ဒီ CPU တွေဟာ 1 second အတွင်းမှာ လုပ်ဆောင်ချက်ပေါင်း 1 ထရီလီယံ (1000 ဘီလီယံ) ထိလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Apple ကိုယ်တိုင် Design ဆွဲထားတဲ့ Machine Learning (ML) Controller ပါဝင်ပြီးတော့ ဒီ ML Controller ဟာ လုပ်ဆောင်ရမယ့် task တွေကို CPU, GPU, Neural Engine တွေဆီ အလှည့်ကျ တာဝန်ခွဲဝေပေးပါတယ် .. အလုပ်တွေအားလုံးကို CPU တခုတည်းက လုပ်ဆောင်တာမဟုတ်ပဲ Component အားလုံးက ခွဲဝေလုပ်ဆောင်တာကြောင့် ပိုမြန်လာပြီး efficiency ပိုကောင်းလာပါတော့တယ် .. ဒီနည်းပညာကို Big Little Technology လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်
ဒါ့အပြင် third party developer တွေဟာ AR Apps တွေမှာ Natural Language Processing (NLP), Image Classification, Character Animation တွေကို ချောချောမွေ့မွေ့ ဆောင်ရွက်လာနိုင်ပါတော့တယ်
A13 Bionic Chip ထဲက GPU ဟာလဲ Apple ကိုယ်တိုင် Design ဆွဲတာဖြစ်ပြီး Core4လုံးပါဝင်ပါတယ် .. ဒီ GPU ဟာ အရင် A12 Bionic Chip ထက် 20% ပိုမြန်ပြီး 40% စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသက်သာပါတယ် .. ဒီ GPU ကိုမောင်းနှင်ဖို့အတွက် Metal ဆိုတဲ့ Software နည်းပညာတမျိုးကိုလဲ Apple က ထုတ်ပေးထားပါတယ်
GPU ဆိုတာကတော့ Graphics Processing Unit ကို ပြောတာဖြစ်ပြီး Gaming လို Performance အကြီးအကျယ်လိုတဲ့နေရာမှာ မောင်းနှင်အသုံးပြုပါတယ်
A13 Bionic Chip ထဲက Neural Engine ဟာလဲ Core 8 လုံးပါဝင်ပါတယ် .. ဒီ Neural Engine ဟာ အရင် A12 Bionic Chip ထက် 20% ပိုမြန်ပြီး 15% စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသက်သာပါတယ်
Neural Engine ဆိုတာကတော့ Artificial Intelligence (AI) နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အရာတွေကို Processing လုပ်ပေးတဲ့ Hardware ဖြစ်ပါတယ် .. အဓိက,ကတော့ Face ID ပါတဲ့ Device တွေရဲ့ SoC မှာတွေ့ရလေ့ရှိပြီး Face ID အလုပ်လုပ်ဖို့ Neural Network ကို ဒီ Neural Engine ကနေတည်ဆောက်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်
Face ID အကြောင်းအသေးစိတ်ဖတ်ရန် – https://www.pyaeheinnkyaw.tech/how-apple-face-id-works-and-does-it-secure/
Neural Engine ဟာ Augmented Reality (AR), Machine Learning, Image Recognition အစရှိတဲ့ Software Processing ပေါင်းများစွာရဲ့ အဓိကကျတဲ့ Hardware တခုဖြစ်ပါတယ် .. Neural Engine ထဲမှာ iDevice Security ရဲ့ အသည်းနှလုံးဖြစ်တဲ့ Secure Enclave ကိုမြှုပ်နှံထားပါတယ်
Secure Enclave ဆိုတာ register လုပ်ထားတဲ့ Touch ID နဲ့ Face ID စတဲ့ Bio-metric data နဲ့ Apple Pay Data တွေကို Encrypt လုပ်ပြီးသိမ်းပေးထားတဲ့ Hardware တခုပါပဲ .. ဒီလို Dedicated Hardware တခုထည့်ပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် iOS ရဲ့ Kernel ကို exploit (hack) လုပ်နိုင်ခဲ့ရင်တောင်မှ User ရဲ့ Touch ID or Face ID data ကိုရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး
နောက်တခုက A13 Bionic Chip ရဲ့ Neural Engine ကြောင့် iPhone တွေမှာ Deep Fusion လို့ခေါ်တဲ့ ကင်မရာနည်းပညာအသစ် ပါဝင်လာပါတယ် .. Deep Fusion ဆိုတာကတော့ Low Light အခြေအနေမှာတောင် Detail တွေကောင်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့ နည်းပညာပါ .. ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတော့ Capture button မနှိပ်ခင် ၄ ပုံ, နှိပ်ပြီး ၄ ပုံတို့ကိုရိုက်ကူးထားမှာဖြစ်ပြီး capture button ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ long exposure ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်ကူးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် .. ဒီတော့တစ်ခါရိုက်ရင် ဓာတ်ပုံ9ပုံတပြိုင်တည်းရိုက်ကူးပေးမှာဖြစ်ပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံ9ပုံကိုပေါင်းကာ အကောင်းဆုံး ဓာတ်ပုံ 1 ပုံထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီ Processor တွေဟာ M Series Co-processor တွေပဲဖြစ်ပါတယ် .. Co-processor လို့ခေါ်ရခြင်းအကြောင်းကတော့ Processor တခုအနေနဲ့ သီးသန့်ရပ်တည်နေတာမဟုတ်ပဲ မူရင်း A Series Processor ကိုအကူအညီပေးဖို့ ဖန်တီးထားတာဖြစ်လို့ Co-processor လို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်
Apple ဟာ Motion Co-processor တွေကို 2013 ကတည်းက အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခု A13 Bionic Chip ထဲပါလာတာကတော့ M13 Motion Co-processor ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီ Motion co-processor အလုပ်လုပ်ပုံကိုနည်းနည်းရှင်းပြပါတယ် .. သင့် Phone ကိုမသုံးနေတဲ့အချိန်မှာရော, သုံးနေတဲ့အချိန်မှာပါ သူတို့က အလုပ်လုပ်နေရတာဖြစ်ပါတယ် .. ဖုန်းတလုံးလုံးမှာရှိတဲ့ Sensor တွေက Data ကို လိုက်လံစုဆောင်းထားပြီး လိုအပ်ရင် လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ ချက်ချင်းအသုံးချနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ထားရတာ Motion co-processor တွေရဲ့အလုပ်ပါ .. ဒီအချက်က Battery Life ပိုမိုကောင်းမွန်စေတာဖြစ်ပါတယ်
နောက်ထပ်အလုပ်ကတော့ iPhone ထဲမှာပါဝင်တဲ့ Accelerator, Gyroscope, Compass, Barometer, Microphone တို့နဲ့ပါ တွဲအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပြီး “Hey Siri” လို Voice Command မျိုးကို Response လုပ်တာမျိုး, Raise to Wake လို Function မျိုး, သင်လမ်းလျှောက်နေတာ, ကားမောင်းနေတာ, အိပ်နေတာအစရှိသဖြင့် လှုပ်ရှားမှုအားလုံးကိုသိရှိနေတာမျိုးက ဒီ Motion Co-processor ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီကောင်လေးကို Application Processor လို့လဲခေါ်သေးပြီး iPhone, iPad တွေမှာအပြင် Apple Watch, AirPods တို့လို Device တွေမှာပါ ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားပါတယ်
A13 Bionic Chip မှာအဓိက အာရုံစိုက်ထားတဲ့ အပိုင်း2ပိုင်းရှိပါတယ် .. တပိုင်းက အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ Machine Learning အပိုင်းရယ် နောက်တပိုင်းက Low Power Design လို့ခေါ်တဲ့ ပါဝါစားသုံးမှုကို တတ်နိုင်သလောက်လျှော့ချတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်
အားလုံးသိပြီးကြတဲ့အတိုင်း A13 Bionic Chip ထဲမှာ အစိတ်အပိုင်းများစွာပါဝင်ပါတယ် .. ဒါပေမယ့် ဒီအစိတ်အပိုင်းတွေဟာ အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး .. ဒီတော့ အလုပ်လုပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုသာ Power Supply ပေးလိုက်ပြီး အလုပ်မလုပ်နေတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို Power ဖြတ်တောက်ထားမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ Power စားသုံးမှုအလွန်တရာ လျော့ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ် .. ဒီနည်းပညာကို A13 Bionic Chip မှာထည့်သွင်းသုံးစွဲပေးထားပါတယ်
အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ A13 Bionic Chip ဟာ Transistor ပေါင်း 8.5 ဘီလီယံလောက်ပါဝင်ပြီး Performance လဲအလွန်တရာ ကောင်းမွန်နေပေမယ့် ပါဝါစားသုံးမှုပိုင်းမှာ သိသိသာသာလျော့နည်းသွားတာက ဒီနည်းပညာကြောင့် .. ဒီ Architecture ကြီးဟာ Apple Silicon က Engineer တွေကို အရမ်းလေးစားမိတဲ့အချက်တချက်ပါပဲ
Image Signal Processor (ISP) လို့ခေါ်တဲ့ Component တမျိုးကလဲ Photography နဲ့ Videography အတွက်အလွန်အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခုပဲဖြစ်ပါတယ် .. ISP ဟာ Camera ကရိုက်လိုက်သမျှ Photo, Video တွေကို Processing လုပ်တာဖြစ်ပြီး ISP ကောင်းလေ Result ကောင်းလေပဲဖြစ်ပါတယ်
Apple စင်ပေါ်တက်ပြီးအော်သွားတဲ့ Computational photography ဆိုတာကလဲ ဒီ ISP အားကိုးနဲ့အော်သွားတာပါ
Modem ဆိုတာကတော့ သင် Internet သုံးလို့ရအောင် ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ Component လေးဖြစ်ပြီးတော့ A13 Bionic Chip မှာ Intel ရဲ့ XMM 7660 LTE Modem ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ် .. 4G Modem ဖြစ်ပြီးတော့ Download Speed အနေနဲ့ အများဆုံး 1.6Gbps (1600 Mbps) အထိရရှိနိုင်ပြီး Upload Speed ကတော့ 225Mbps အထိ အများဆုံးရရှိနိုင်ပါတယ်
– သင့် iPhone ကို Hacker တွေအလွယ်တကူတိုက်ခိုက်လို့မရနိုင်အောင် ကာကွယ်ပေးတဲ့ NX Bit,
– Virtualization နည်းပညာအတွက် Hardware ကနေကူညီထောက်ပံ့ပေးမယ့်နည်းပညာ,
– သင့် Data တွေကို ခိုးယူကြည့်လို့မရနိုင်မယ့် AES Encryption and Decryption,
– Payment လုပ်တဲ့အခါမျိုး ဒါမှမဟုတ် Netflix, Apple Music တို့လို DRM Protect လုပ်ထားတဲ့ Content တွေ Access လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာ လုံခြုံမှုရှိရှိနဲ့ လုပ်ဆောင်လို့ရဖို့အတွက် ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ Trust Zone လို့ခေါ်တဲ့ Security
– သင့်ဖုန်းအသံထွက်အောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ Audio Processor
– Video Format တွေကို Encode/Decode လုပ်ပေးနိုင်မယ့် Video Encoder/Decoder
– သင့် Display ပေါ်မှာ ဘာပြမလဲဆိုတာတွေကို စီစဉ်ထိန်းညှိပေးတဲ့ Display Controller
– Camera လုပ်ဆောင်ချက်တွေအတွက် သီးသန့်လုပ်ဆောင်ပေးမယ့် Camera Fusion
အပြင် တခြား အစိတ်အပိုင်းများစွာလဲပါဝင်ပါသေးတယ်
ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင် ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ A13 Bionic Chip ရဲ့ အသေးစိတ်အကြောင်းသိသွားလောက်ပါပြီ